Ivato : Caméra N° 8 mitatitra entana maivamaivana circuit normal, entana avy nosavaina, caméra N° 6 misy manosika chariot mavesatra hors circuit de fouille 31 desambra 2020, 04:49 heure locale, eny amin'ny fiaramanidina 5R-ASB.
Fahasalamana : Hanao grevy ny Paramed manomboka ny alatsinainy
Taorian'ny hetsika fitakiana rehetra mahakasika ny asa, ny tambi-karama ho an'ireo Paramed, dia tsy nahita vahaolana ny teo anivon'ireo antanan-tohatry ny fitondrana, ka dia hiroso amin'ny fitokonana ireo Paramed manomboka ny alatsinainy 08 febroary 2021. Ireo dokotera mpitsabo no hiandraikitra ny asa tsy maintsy atao, service minimum. Nisy moa ny naoty nataon'ny minisitry ny fahasalamana mibaiko ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra hamojy ny asa, ary tsy misy mahazo mangataka fialan-tsasatra na hanao fivoriana ankoatran'ny fampandehanana ny asa, fa tsy nanakana ny sendikan'ny Paramed hiroso amin'ny fitokonana izany, izay zo fototry ny mpiasa.
jeudi, 04 février 2021 16:20
Fandriam-pahalemana : Nahitana grenady teo anoloan'ny ambasady Libianina
Tokony tamin'ny 4ora hariva teo, androany alakamisy 04 febroary, dia nahitana grenade offensive tao anaty dabapako, hitan'ireo mpisava fako, teo anoloan'ny masoivoho libianina etsy Ampandrana. Grenady efa somary arafesina izy ity, nefa tena mbola mampidi-doza. Efa eo ampelatanan'ny Polisim-pirenena BC ny fanaovana ny fanadihadiana
Mitaraina mafy ireo mponina ety Andranomanalina Isotry noho ny loto sy tsy fandriampahalemana. Maro ihany koa anefa ireo tsy tomombana ao amin'ity fokontany ity. Raha tsy hiresaka afa-tsy ny fanaovana résidence en blanc, tsy misy reçu ny zavatra rehetra atao, baranahiny ny filokana isan'elakelantrano, ny loto manerana ny tanàna. Tsy voafehy ny fandriampahalemana, manjaka ny vaky trano sy ny sintomahery, hoy ireo mponina mitaraina ety. Manao antso avo amin'ny fitondram-panjakana izy ireo ny mba hamahana ny olana faran'izay haingana, satria dia tsy nisy fivoarana mihitsy ity tanàna ity hatramin'izay nitantanan'ireo mpitantana nifandimby, fa dia mambotry vahoaka sy mikepoka ny volam-pokontany fotsiny. "Mitady fivoarana izahay" hoy izy ireo fa tena simba ny tanàna. (Jereo Sary Tohiny)
Mila miasa avokoa ny mpitsabo rehetra, miasa avokoa ny mpiasa rehetra, tsy misy fangatahana andeha hiala sasatra na congé ny mpiasa, tsy misy fivoriana azo atao ankoatran'ny resaka fampandehanana ny toeram-pitsaboana azo atao. Izay ny naoty navoakan'ny minisitry ny fahasalamana ny 28 janoary 2021, manoloana ny firongatry ny valanaretina Covid-19, sy ny fitrangan'ireo areti-mifindra hafa eto Madagasikara. Tsy miala izay fepetra izay raha tsy miverina amin'ny laoniny ny fahasalamam-bahoaka.
Raha tsiahivina dia ny 01 febroary 1963 no nitsanganan'ny "Ecole des Cadres des Services Civique", Sekolin'ny manamboninahitra lefitra ao Antsirabe ankehitriny, izay nahatonga izao fanamarihana sy fahatsiarovana isan-taona izao. Andiany faha-58 ny fankalazana ny Andron'ny manamboninahitra lefitra amin'ity.
dimanche, 31 janvier 2021 19:53
Ambilobe : Mpifindra monina an'arivony no efa tonga eto an-toerana
Namory ireo mpifindra monina ny tompon'andrikim-panjakana eto an-toerana, nanazavana ny fombafomban-tany eto, ny fiaraha-monina aty avaratra. Tsy misy lamina maty paika aloha hatreto azo naroso amin'ny fandraisana ireto olona mpifindra monina ireto. Ny tsapa dia olona manana ny fombany izy ireo ary dia mitazona tokoa izay fomba fiainany izay. Misy anefa ireo tompon-tany no hafa fandray izany fihetsika izany, ary misy aza ny mihevitra andreo toy ny malaso, ka mandray fepetra mifanaraka amin'izany. Tsy lavitra an'i Ambilobe moa ny toeram-pitrandrahana volamena ao Daraina sy Betsiaka, izay malaza feno volamena sy vato sarobidy. 56 000 ny isan'ny mponina eto Ambilobe.
dimanche, 31 janvier 2021 19:18
Covid-19 : Maka ny toerany eo amin'ny tsena ny Sputnik V
Efa azo antoka fa aorian'ny ady amin'ny aretina, dia hiditra ny ady ara-toekarena eo amin'ireo mpamokatra vakisiny sy fanafody fanefitry ny Covid-19. Nitranga voalohany ny Sputnik V, izay vakisiny vita Rosianina, mitondra ny anarana mampatsiahy ny zana-bolana voalohany Sovietika, ary ny V milaza fandresena, 7 volana monja taorian'ny fiatombohan'ny valanaretina Covid-19. Mora vokarina sy tehirizina ny vakisiny rosianina (+2 +8°C), misy dozy 2 izy, tsindrona voalohany, arahina tsindrona faharoa. Mora vidy izy 10$ ny dose (2 injections). 91,4 % ny fatram-piarovana entina raha ny nambaran'ny mpikaroka azy.Firenena 50 no efa nanao famandrihana, hividy 1.2 miliara dose. Any Inde, Brésil, Chine, Corée du Sud no anamboarana ireo vakisiny ho an'ny Firenen-kafa manafatra ity Sputnik V ity. Efa manao fangatahana ny Rosianina mba afaka ampiditra ity vakisiny ity any Europe, fa hatreto mbola tsy nodinihina ny fangatahany, ny Eoropeanina rahateo manana karazam-bakisiny telo izay omeny herijika ny mpamokatra azy, ny Pfizer-BioNTech, Moderna ary ny AstraZeneca.